Momba anay - Xiamen Kinghow Outdoor Product Co., Ltd.
KingHow Nanomboka tamin'ny 2005
Amin'ny maha mpanamboatra kitapo anay dia mamokatra kitapo feno mihoatra ny 15 taona izahay. Miaraka amin'ny fenitra avo lenta sy serivisy ho an'ny mpanjifa, niara-niasa tamin'ny mpanjifanay izahay mba hametrahana ny vokatra nozairina tsara indrindra.
Mankasitraka ny mpanjifantsika manerantany izahay, izay nahatonga anay hahita fahombiazana sy handia an-taonany maro amin'ity orinasa ity. Ny hany tokony hataontsika dia ny manome hatrany ny kalitao avo indrindra sy ny vidiny tsara indrindra ho an'ny mpanjifantsika hampandresy azy ireo. Miarahaba ny mpanjifa maro hatrany hifandray sy hanorina fifandraisana maharitra.
Ny faritry ny vokatra lehibe indrindra dia ny kitapom-batsy, kitapo duffel, kitapo fitaovana, kitapo tote, fonosana andilany, kitapo an-tsekoly sy ny hafa izay mihatra amin'ny ety ivelany, gym gym, fitsangatsanganana, miverina any an-tsekoly, fitaovana fampitaovana, laptop digital ary tanjona marketing. Izahay koa dia mitondra entana marobe amin'ireo vokatra mifandraika mifototra amin'ny loharanon-karena, toy ny lainy fitobiana, satroka sy satroka, elo sy palitao, akanjo, amboradara sy maro hafa.
Ho an'ireo mpanjifantsika dia mampanantena ireto manaraka ireto izahay
● ny fanoloran-tenantsika amin'ny kalitao sy ny tsy fivadihana tsy manam-paharoa
● ny vidiny araka izay tratra azontsika atao indrindra, na famokarana manokana na famoahana ivelany
● vokatra avo lenta mifanaraka amin'ny famaritana anao
● fandefasana ara-potoana ary manolora vahaolana fandefasana tsara ho fanovozan-kevitra
Izahay dia ny anjaranao vahaolana. Tsidiho ny pejy fifandraisana hiantso, handefa mailaka ary hanomboka miaraka aminay anio.